Interview - Sunday Myanmar
ဖေဖေကတော့ နှာခေါင်းလေးလှတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ ထိပ်ထိပ်လေး>>>
ကိုယ့်ကိုအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတော့ ဘယ်လိုခံစားရလဲ
အရမ်းကိုပျော်တာပေါ့နော်။ အဲ့လိုစကားမျိုးကြားတဲ့အတွက်လည်း အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်ချို့က ထိပ်ထိပ်ကို Kittပုံစံနဲ့လိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ အဲ့အတွက် အရမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်။
အကယ်ဒမီက ပရိသတ်တွေရစေချင်သလိုရခဲ့ရင် အရမ်းပျော်မှာပါဆိုတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်>>>>>
MAC Cosmetics ဆိုင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အပေါ်
အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အင်တာနေရှင်နယ်လ် brand တွေက မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတာဆိုတော့ တကယ်ကို ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကစ်တို့အနေနဲ့လည်း နိုင်ငံခြားသွားမှ ဝယ်ဖြစ်တာထက် အခုဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်ဆိုင်မှာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ ဘန်ကောက်တို့ စင်ကာပူတို့ထက် ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့အတွက် အရမ်းပျော်ပါတယ်။ အင်တာနေရှင်နယ်လ် Brand ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားမှာ ဈေးဝယ်ရသလိုပဲပေါ့နော်။
မေးရိုးချိုးတာနဲ့ ရင်ဘက်ခွဲစိတ်တာကသေလောက်အောင်နာပေမယ့် နောင်တမရဘူးဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး>>>>
Essence ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
အရမ်းပျော်တယ်ပေါ့နော်။ ပါဖော်မန့်တွေကော အင်တာတိတ်မန့်တွေကော အများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ ပွဲတက်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ဒါအရမ်းတန်တယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါ့အပြင် မိတ်ကပ်ပိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း ပရိုမိုးရှင်းတွေအများလုပ်ပေးတော့ လာပြီးတော့ အချိန်ပေးရတာ တန်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့ မြင်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့အတူပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး လိမ်မာအောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ အေးမြတ်သူ>>>>
ကိုယ်တွေငယ်ငယ်လေးထဲက ကြော်ငြာလုပ်ငန်းတွေကို ကြော်ငြာတွေခေါ်ရိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ ကိုယ်တွေကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ Commercial model ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့အစ်ကိုပါ။ ဒီဘက်မှာလည်း ကိုယ့်အစ်ကိုနဲ့ အရမ်းခင်တယ်။ အရမ်းရင်းနှီးတယ်ပေါ့နော်။ ကိုယ့်အစ်ကိုကြီးက အခုလိုစွံသွားတော့ အရမ်းဝမ်းသာတာပေါ့နော်။ ခင်လာတာအရမ်းကြာပြီပေါ့နော်။ ဟိုးမော်ဒယ်ပေါက်စသေးသေးလးထဲက ခုချိန်ထိပဲပေါ့နော်။ အစ်ကိုက လူမှုရေးအရမ်းကောင်းတယ်။ မောင်နှမသားချင်းတွေလို အရမ်းစောင့်ရှောက်တယ်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ စိတ်ရင်းလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။
Facebook ပေါ်မှာမချစ်ချင်ဘူးအပြင်မှာပဲချစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အောင်ရဲလင်း>>>>
တက်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးက Essence ကိုမျိုးက ကျွန်တော်နဲ့ညီအစိုလိုရင်းနှီးလို့ တတ်ဖြစ်တာပါ။ အရမ်းလဲခင်ပါတယ်။ ဒီပွဲလေးအတွက်ကို တက်ရောက်ဖို့ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းပြီးတော့ ဖိတ်လိုက်တာပါ။ အဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကို တက်ဖြစ်တာပါ။ ဒီလေးနှစ်ပြည့်ကနေစပြီးတော့ Essence ကုန်ပစ္စည်းများ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် အဓွန့်ရှည် တည်တံ့နိုင်ပါစေလို့ ကျွန်တော်က ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။
© 2021 Sunday Journal Myanmar Ltd. All Rights Reserved. Sunday® isaregistered trademark of Sunday Online Media. All contents and photos are copyright protected.